Ankasomparana - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA - Tononkalo Malagasy - Serasera.org
Ankasomparana - SARONDRAHONA RAMBOLAMANANA
­	Ndrônana ! Izay moa no anaranao ?
­	Anarako izany! fa iza no nilaza izany taminao?
­	Ny olon –drehetra kah! Iza moa no tsy mahalala anao?
­	Ny tsy mahalala ahy ahoana ry… ry iza moa azafady?
­	Miavo fotsiny hoe!
­	Ry Miavo?
­	ka fantatry ny olon-drehetra anie ianao e! na zaza na lehibe dia samy misiotsioka sy miantsoantso anao daholo hoe: “Ndrônana a!!!”
­	Aiza indray e !
­	Marina anie izany e!
­	Ary handeha hiantsena angaha i Miavo izany?
­	‘Ndeha hividy matavy e! Fa ahoana?
­	Mba handeha koa aho kah!
­	Mandehana miasa fa efa mivoha anie ny biraonareo e! Efa ireo daholo ny Mpiasa.
Dia tsy haiko izay andro tsara na fifandrifian-javatra fa resadresaka tsotsotra sy fohy ohatr’izay fotsiny no nifanaovanay dia lasa raiki –pitia tanteraka tamin’i Miavo aho. Teo akaikin’ny biraoko ny tranony , ary lalany marain –tsy hariva ny mandalo anay isan’andro. Afo sy vanja tokoa ny fitia ka vao akasoka dia mirehitra sy miredareda avy hatrany; Indrindra fa bozaka no manodidina eo.
­	Iny indray i Miavonao! Hoy ilay tovovavy iray mifanila latabatra amiko ao am –piasana; sady ohatry ny nitsiky naneso izany ny endriny niteny tamiko.
­	Mankaty ve?Hoy aho tsy rototra. Poa toy izay dia io tokoa i Miavo fa mijaridina mitsiky amiko eo am –baravarana.
­	Manao ahoana i Ndrônana? Manao ahoana daholo ?
­	salama tsara akia a! Hoy ireo marovavy niara –nihomehy sy nikakakaka eran’ny birao. Mipetrapetraha eo akaikin’i Ndrônana e!
­	ka izy àry ity tsy mamaly koh! Fa marary angaha ianao? Hoy izy nanatona ahy sady nisafosafo ny lohako.
­	Tsy marary aho fa lasa saina fotsiny. Manao ahoana i Miavo?
­	Salama tsara e! Tsy marary a?
­	Tsy marary izany aho ho’aho!
Tsy haiko na tsapan’i Miavo ihany fa odiany fanina na tena tsy takany mihitsy fa TIA AZY AHO . mandraiky marary tampoka izany foana ny andohako raha vao mandalo izy, na dia ny feony fotsiny aza no reko any ambadimbadika any dia miontanontana sy mivadibadika ny foko. Tiako izy fa tsy mbola mety ho tia ahy. Mandalo mitsidika matetika ny toeram-piasako izy fa tsy mety ho takatro ny antony. Mety ho tia ahy ihany izy fa noho izaho tsy mbola nitory fitiavana taminy dia sarotra aminy ny hiboraka taloha eo imasoko fa raiki –pitia amiko koa izy. Izaho koa anefa tsy sahy mirafarafa loatra hamboraka fitiavana amin’olo- mandalo .
Raha hisedra fitia ianao amin’ny fiainana dia andraso ho efa mandravina aloha ny fitiavan’ny olon-kotiavina vao atsimohy moramora ny fanirianao azy. Amin’izay mba mifandanja ny lalana hiarahana na ny sampanana hisarahana raha sanatria ho avy izay loza ka tonga ny tsy mety. Ny olana indrindra mandÒ ny fitiavana mantsy ka mahakitantaina ny fon’olombelona dia ny famitahana sy ny fahadisoam –panatenana eo amin’ny fiarahana. Alaivo ambony, alaivo ambany tsara aloha hoe: “ tiana anao ve ilay olona sa mitsapa ranom –bary fotsiny; Ary raha tia anao ilay olona, inona moa no tsy irosoanao handrombaka azy ? Ny mifanohitra amin’izany kosa, raha tazana fa sain – dalao ny fony, inona no antony tsy handosiranao ny fandriny? Tsy hitako mihitsy!!!
Fa rehefa nataoko ny tombatombana rehetra ka namadibadika ny lalana maro hodiavinay aho, dia tsapako mihitsy noho ny farany fa tia ahy I Miavo. Tiany aho fa miandry izay hiloarako vava fotsiny izy. tsy nionona tamin’iny toky iny anefa aho fa nosedraiko farany izy nialohan’ny namborahako fatotra ny fitiavako.
Tsy niandry azy handalo toy ny fanaony intsony aho fa izaho mihitsy no nanira –tena niantsoantso azy teo am –bavahadiny.
-Ao ve I Miavo, azafady e? Hoy aho tamin’ilay rafotsibe tazako nisasa tongotra teo an –tokontaniny.
-Mbola mikarakara sakafo izy anaka a! Tena mbola sahirana be mihitsy; hoy ny fangovingovitry ny feon’antitra ; - Fa ianao moa no iza, raha tsy mahadiso?
Nisalasala aho, hiteny aho… toa handihy tsy afa- tavony ka valala eny an-danitra no asiana sira; tsy hiteny indray anefa … sao hanafohy ny ho lava fa raha tiana mantsy, hono, ny vady dia ny rafozana no tsinjovi-mandeha. Vaka teo aho, nisafo rirana teo, niahotrahotra toa sahisahy. Farany, tsy nahandry rafotsy fa natosany tamin'ny tongony roa ny fara-rano tamin'ny zinga nisasany dia nitodi-doha namonjy ny varavarana izy sady nijery somary nanenjana ny ketrona tamin'ny handriny no nanezaka nihiaka hoe:
-Ataoko hoe: iza ho'aho?
-Ilay mpiasa atsy amin'ny birao atsy hoe!
-Tsy ianao ilay Ndrônana ?
-Fa ahoana no nahalalanao ny anarako?
-Ka mipetraka eo an-doha fandrinany eo anie ny sarinao e! Hoy ilay vaviantitra somary nitsiky tsy sazoka.
-Ka izaho anie tompoko, tsy mbola hary nanome sary azy e! sady tsy fombako rahateo koa izany, hoy aho nanakona henatra somary nanetsika heloka ihany.
Tsy tiako hisy olon-kafa hahalala mihitsy fa tia an'I Miavo aho, ary tsy mbola te-handre teny entin’olona koa aho mitatitra fa tia ahy I Miavo; na ny tena marina angamba dia tsy ekeko mihitsy ho ny manodidina no hanely tsaho raha tsy mifandresy lahatra aloha izahay roa fa mifankatia tanteraka.
-Fa tena ianao anefa ilay Ndrônana ? Hoy izy toa naka toky mafy.
-Ny anarana aloha dia ahy fa ny sary no mampieritreritra.
-Andraso eo àry aloha fa hongotako ilay sary eo an-doha rindrina dia entiko eny hojerenao; sady nivikiviky ‘ndeha hiditra ao an-trano izy, kanjo nivoaka tampoka ‘ndeha hanary rano teo amin’ny tatatra I Miavo. Tonga dia nokopahiko sady niantso ilay rafotsy aho hoe:
-Aoka ihany Bebe fa efa iny izy a!
-Mitady ahy angaha ianao? Hoy I Miavo hendratra dia hendratra.
-Mitady anao mihitsy aho! Tena mitady anao maika.
Tsy haiko na ny fandrenesan’I Miavo hoe MAIKA no nampaninona azy na ny fahatongavako nitady azy mihitsy no tsy nampoiziny , fa poa toy izay dia niova ho mena ilay tarehiny mavokely malamalama iny ary mena hatrany amin’ny sofiny; tsy fantatro koa na reny ny resak’ilay rafotsy tamiko teo na ahoana ka mahamahina azy ny hanontaniako mikasika ilay sariko mihantona amin’ny fantsika eo an-doha fandrinany.
-Andraso vetivety ary aloha hateriko any an-trano ity koveta ity dia ho avy aho.
Toa izay koa no nanaovana veloma sy lakolosy niravan’ny resakay fa vao nitsofoka ny tranony izy dia niantso ahy koa ny tao amin’ny biraoko, Tsy maintsy namonjy ny asako aho. Tsy nandalondalo tao aminay intsony I Miavo iny tontolo andro iny. Sahirana izy angamba!!!
Nanomboka niasa ny saiko namantatra ny toetran’ I Miavo: tsotra izy amin’ny ankapobeny, mora iresahana, fa toa miaina fiainana mifono mistery na mety ho feno mistery koa angamba satria mahavariana ihany raha izahay tsy mbola nisy fifandraisana akory, kanefa ny sariko aza efa lolohaviny eo an-doha. Ny hevitra faharoa nitsimoka tao an-tsaiko koa dia ny hoe: “izaho irery ihany angamba no tsy nahalala an’I Miavo fa izy mety mahalala ahy amin’ny antsipirihany. Misy antony ilazàko izany.
- Apetrako kely aminao ity dia holalovako eto rahariva, hoy ilay rangahy nanao
zavatra teo amiko. Ohatry ny hitako fa mbola sahirana mantsy ianao ka mety ho elaela.
- Ao fa vitaiko vetivety ny anao e! mahazoa toerana aloha ianao fa tsisy folo minitra akory io.
- Sao dia mandodona anao amin’ny asanao re tompoko ô?
- Aza mihafahafa mihitsy Ray aman –dReny fa samy isika ihany anie no eto e! Ary ianareo mpanjifa indrindra no andrianina amin’ny asanay.
- Sao dia manahirana anao mantsy !?
- ka iza indray àry no tokony hisahiranana fa tsy ianareo izao e? Hoy aho somary nitsiky sady niala kely teo amin'ny seza nitoerako dia nanatona ilay rangahy fa vita ny zavatra nampanaoviny ahy.
- Ary vetivety ianao izany a! Hoy izy gaga dia gaga amin'ny fahakingako miasa.
- Isika angaha mba ela amin'ny zavatra iray izany Ray aman –dReny a! kapoakatsika io sady maika hifindra amin’ny anankiray.
- Efa tena zatra asa marina ianareo, ohatry ny ho very ihany izahay raha hilaozanareo amin’ity zavatra ity.
- ka ny fanambadiana aza anie tsy nafehy fa nafandrotra e! mainka fa izay asa…; Rehefa tsy anjara io dia misaraka maina.
- Ary tena miresaka anie ise izany e! Ise angaha mpikabary?
Tsy izaho no namaly iny fanontaniana farany iny fa ny rehetra tao dia samy nilaza izay hitany sy reny tetsy sy teroa . farany dia mba nilaza izay mba fantany ihany koa ilay Ray aman –dReny :
-Tsy haiko na mahatadidy ise na tsia fa izaho no nitsara ny kabarin’ise teny Ampefiloha sy teny Andavamamba. Nahazo voalohany ise tamin’izay. Ka tsy Ise moa ilay Ndrônana ?
-Tena izaho tokoa! Fa iza moa ianao?
-Ay! Aoka fa tadidiko! Miala tsiny Pasitera fa efa ho telo taona aty aoriana moa!
Nomeko azy ny asany dia noraisiko ny volany. Nijery ny famataran’ora teny amin’ny tanako aho ka efa firavàna: nidiako ny birao dia samy nody daholo.
Tany anaty fiara aho vao niverina fa nanadino entana, nivikiviky niverina tamin’ilay fiakarana kely iny aho no indro I Miavo mijaridina manohana ny rindrin’ny Birao fiasàko. Efa an-kevitry ny elaela no nijoroany teo raha ny fijeriko azy, ary sasatra ery izy manofahofa ny volony lava atopatopan’ny rivo-malefaka nitsena ahy efa tora-kelin’ny hafanana mivimbina ny palitaoko.
-Fa hiditra sahady angaha ianao? Hoy izy nitsatsaingoka, nefa izaho no saika hanontany azy taloha. Hany ho’aho? Hoy izy nisafosafo ny lohako indray.
-Aoka aloha fa sempotra aho! Hoy aho nanala ny tanany sady namoaka ny fanalahidy tany am –paosiko, tsy navelany novohaina anefa ny varavarana fa nosintoniny mora aho dia teo izahay niankin –drindrina teo.
-Fa iza no andrasanao eto ry Miavo?
-Miandry ny fidiranareo hariva aho kah!
-Fidiranay ahoana? Vao mirava anie izao e!
-Ka andrasako foana e! tsy ela noho ny niandrasan’ny tantara hampihaona antsika akory izany, nefa ny fotoana aza mba nahandry ka isika indray ve no hiraviravy tanana? Fotoana izao ry Ndrônana a! Fotoana mihitsy anararaotana ho fandaminana ny zavatra rehetra. Toa manjary tsy fantatro aza hoe inona no niverenanao ato amin'ny biraonao indray amin'izao ora firavàna izao! Sa nahaonan'ny vintana eto isika?
-Miavo a! Nanadino ny solomasoko sy ny fitondram- bolako aho dia izay no niverenako fa tsy nanantena mihitsy ny hahita anao eto aho. Handefa taratasy ho any Toamasina mantsy aho ka tsy maintsy mila vola any amin'ny Paositra.
Hendratra tampoka izay I Miavo ary nivoaramena vao mody nanarona ny endriny ho toy ny tsy niaina fihetseham –po nandalo iny izy. Nakipany kely ny volony vao niteny nihankahana izay izy nanao hoe:
- Fa hanoratra ho an’iza ianao?
- Handefa taratasy fotsiny aho kah!
- Namana sa…? Havana sa…?Ray aman-dReny sa…?
- Namana kah! Namako mandrato fahaizana any Toamasina. Nahatonga taratasy tato amin’ny birao izy omaly dia tsy maintsy valiana fa somary maika no ilàny ny hevitro. Ny paositra koa mbola ora maro vao tonga any.
- ka maika izany ianao raha azoko tsara a?
Voalazanao! Maika lava e! Oay ! Miala tsiny marina ry Miavo fa tsy afaka niandry anao aho ilay teo noho ny habetsahan’ny olona nitady ahy. Voatery namonjy ny asako aho ka miala tsiny indrindra.
- Tsisy tsiny e! Izaho koa anie tsy nanan-kolazaina mihitsy raha ilay teo iny e! Izao aho vao vonona hiresaka aminao.
- Izany hoe, tsy izao angamba fa arehefa avy eo? Hoy aho nitsatsaingoka ny resany.
- Satria tara koa ianao raha izao e? Marina izany! Andao àry aloha misakafo dia rehefa avy eo miresaka e!
- Tsy mahasarotiny an'I Miavo an? Sao dia tezitra mantsy ianao!
-Tezitra ahoana ry Ndrônana a ? Izaho aza anie efa vonona ny hiandry ny fidiranao amin’ny roa e!
- Dia hiandry eto foana?
- ka ho aiza àry aho e? Izaho tsy te-hiverina any an-trano intsony fa mbola ‘ndeha ho any Ampefiloha aho rehefa avy eo.
- Hay! Tsotra izany! Andao miaraka fiarakaretsaka amiko ianao fa izaho miala eo Anosy dia izy manatitra anao any Ampefiloha.
- Ka tsy ampy izany fiarakaretsaka izany anie ny volako e! Tsy aloe mandeha fiara mpitatitr’olona ihany ?
- Tsy izany fa tsy tiako hohelingelenin’olona isika rehefa miresaka, moa ny andro ihaonana toa zato, ka andao fa izaho no mandoa ny vola.
- Fa manam –bola be angaha ianao ry Ndrônana?
- Tsy hoe manam-bola be fa mba lehilahy mikarama ry Miavo a ! fa inona no mahatonga anao manontany izany?
- An! An! Heveriko fa tsy dia misy vola mantsy io asanareo io
- Misy vola io kah! Andao àry e!
- Ary aiza ity solomaso sy fitondràna vola nalainao
- Oay! Tena saika adinoko marina! Andraso kely vetivety àry aho hamoha birao e!
Taitra tampoka aho! Nihodikodina sy taitaitra teo am –pitoerana fa tsy nahita hatao.
- Fa inona no mapihidikodina anao anao eo e ?
- Ny fanalahidy ry Miavo a! Tsy hitako n,y fanalahidy tato am –paosiko.
- Fa inona ity lalaoviko ity? Hoy izy tsy rototra sady nanolotra ny fanalahidy teny an-tanany.
- hay tokoa moa nalainao tety an-tanako iny teo ? Marina izany!
- Fa fanina angaha I Ndrônana?
- Tsy hoe fanina aho fa mba diso tadidy fotsiny.
Nanidy birao izahay dia lasa nony avy eo, vao nisakana fiarakaretsaka koa moa dia nahazo; tsy nisy nipetraka teo anilan’ny mpamily fa tao aoriana izahay roa no nipetraka: izy avy eo an-kaviako, izaho kosa teo an-kavanany.
Ny mahagaga indrindra amin’ny fiainana dia izao: raha ilainao ny fotoana , mihazakazaka tsy an-kijanona izy, fa raha amin’ny ora tsy tianao hatrehina dia mihisatra toa sady maneso no mandatsa anao ny zavatra rehetra.
-Ndrônana a! Toa midobodoboka be ho’aho ny fonao e! Hoy I Miavo toa mananihany ahy eo ambany saokako.
- Fa notsapainao angaha ny foko teo ? Ohatry ny tsy henoko!
- Tsy nitsapa ny fonao aho fa niankina teo an-tratranao iray minitra fotsiny.
- Midobodoboka izy angaha satria taitra!
- Taitra tamin’ny torimasony sa taitran’izay manodidina anao sa taitran’izay zava –misy rehetra?
- Taitra fotsiny izy! Tsy haiko, Fotoana tokony mba hahatairany koa angamba izao. Fa izao e, fetiko amin’ny tapa –bolana anio ka mba manasa anao aho ho tonga etsy Analakely.
- Analakely eo amin’ny inona ? Hoy ny fitsatsaingony ny resako.
- Andraso eo amin’ny tany malalaka eo fotsiny aho dia eo ianao no raisiko Sady manan –dresaka lehibe hambara aminao aho amin’io andro io. Ka afaka ve ianao sa…?
-Tonga dia faka aho fa tsy aleo ve miara –miainga isika e?
- Ka raha izany no mba tianao dia tsotra: handraso eo Masikara aho fa halaiko amin’ny fiara eo ianao. Amin’ny iray ora tsy diso a!
-Eny àry! Dia mbola tsy hiresaka n’inona n’inona izany isika androany ?
-Fa efa misy resaka antenainao angaha avy amiko sa…?
-Mba te-hiresadresaka aminao fotsiny aho ry Ndrônana a! Mihaino ny feonao anie mahafinaritra e!
-mahafinaritra ahona ry Miavo?
Ohatra ireny mihaino onjam –peo ireny ny mihaino anao!
Somary nosafoiny kely izay ny voloko dia nahofahofany teo amin’ny masoko havia ny loha-volony manopy menan’ny andro, izay vao nihomehy somary nisangy izy. Niara- nikakakaka teo izahay telo mianaka mbamin’ny Mpamily.
- Fa mpanao fandaharana tokoa angaha ianao tompoko? Hoy ingahy mpamily nangala-pijery tany amiko sady miatrika ny lalan-kizoran’ny fiara nitondra anay ihany.
- Fa hoana angaha?
- Ka ohatry ny vao tamin’ny Alahady alina no reko ny feonao nihiakiaka hoe : “NY ZANAK’OLONA E ! TANDREMO !!!
- Misy marina ihany ny voalazanao, saingy tsy mpanao fandaharana aho fa sendra nivahiny fotsiny izany renao izany.
Tapaka tampoka ny resakay fa nohitsahin’Ingahy mpamily haingana ny kifahatra ka nihiakiaka tsy nifandrenesana. Niara-nitsamboatra izahay hijery, kanjo, vavy antitra efa nahazo taona no nanao fanahy iniana nanapaka arabe nefa tsy lalan’ny mpandeha an-tongotra akory. Vao nitraka aho dia tazako ny soratra roa tao anatin’ilay fiarakaretsaka nandehananay: teo ambanin’ilay hoe: “HE JEHOVAH NO MPIANDRY AHY !”, dia nisy soratra nivandravandra be hoe : “RARANA NY MIRESAKA AMIN’NY MPAMILY!”. Nitsara tena aho vao nahatsiaro tampoka; Hay moa ka ny mpamily no niresaka tamiko fa tsy izaho no niresaka tamin’ilay mpamily? Na izany na tsy izany anefa dia ny resakay ihany no nanaitra ilay mpamily ka nahatonga azy nanontany. Noho izany, tsy afa-tsiny marina ihany aho. Tafajanona ihany izahay, tafita ihany koa ilay vavy antitra; nitohy indray ny dia.
- vaventy ny volanareo sa madinika? Hoy ingahy mpamily niteny tsy an-kitodika intsony.
- Dimy arivo ariary ity! Hoy aho mbola tsy tonga saina tsara sady nangarongarona ny vola tao am –paosiko.
- Aleo àry aloha hanampy lasantsy eto isika e!
Nalain’Ingahy mpamily ny vola teny an-tanako, novelominy ny fiara; natolony ahy ny famerim –bola dia nijerijery ny havia sy ny havanana izy vao sahy niroso nanitsaka arabe. Vao niainga ny fiara dia nanomboka niteny nahalankalana indray I Miavo.
-	Ohatra izao foana ve ny fiainanao isan’andro?
-	Androany ihany kah! Isan’andro aho misakafo any amin’ny Hôtely na any amin’izay olona manasa ahy.
-	Ary ireo mpiara –miasa aminao ireo koa izany misakafo miaraka aminao any amin’ny hôtely?
-	Tsy fantatro! Ny ao am-piasana no ifankahalalanay fa ny any ivelany kosa samy mba mihevitra ny lalany. Ny fiainana samy manana ny azy ry Miavo a ! Ny olona maro anaka, izaho tokan –tena; Ny olona manara-damaody, izaho tia hanina. Ka tsy mitovy mihitsy !
-	Ary ny fanamianareo izany dia tsy maintsy kendaina tahaka izao foana isan’andro?
-	Tsy maintsy satria lalàn’ny asa io. Sady tsy dia ratsy koa anie!
-	Oay! Ity amin’izay àry ny palitaonao fa etsy aloha etsy no misy malalaka azo ijanonana, dia ny an- trano indray mihaona e!
-	Fa ny amin’ny tapa –bolana a! aza adinoina !!!
-	Matokia ianao Ndrônana a! Ho avy aho!
-	Mba hajanony kely eo ange ny fiara r’ingahy mpamily azafady fa eo aho no miala a!
Nijanona izy dia nisaotra, izaho koa nisaotra sy nanao veloma azy mianaka. Noraisiko ny tanan’I Miavo dia narindriko ny varavarana. Izy mbola nizotra nankeny Ampefiloha.
Mahavariana ny fiainana, fa raha andasanao ho potsitra ny vay dia vao mainka mangonahona sy mangirifiry; dia toy izany koa ny resaka: rehefa andrasanao ho vaky ny marina sy ny ao ambadiky ny tetika rehetra, dia vao mainka koa avalon'ny fotoana ho amin'ny andro manaraka indray na ny toy izany. Nahagaga ny tsy nahasahiako nivaky am-batolampy tamin'i Miavo tao antin'iny fotoana mamy indrindra iny fa tia azy aho. Tsy fantatro na mizotra manaraka ny rindran –damin'ny fotoana ny fiainan’ny zanak’olombelona eto an –tany, na izy mihitsy no efa nalahatra ho amin’ny kohon –dalana tsy azo ihodivirana, ka tsy mandaitra aminy ny tampoka sy ny kisendrasendra raha fikirina ho fanararaotana. Tapaka teo ny amin’iny, fa renim –pianakaviana iray no nanapaka nanitsy ahy sady maloka dia maloka ny endr iny.
-	Fahasalamanao tompoko ? Hoy aho nandray ny tanany.
-	Salama tsara fa dia misaotra!
-	Ary mitady ahy angaha ianao ?
-	Avy nitady anao tany an-trano mihitsy aho izao fa mbola mihidy any; miantso koa aho anefa , tsy mahazo mihitsy ny telefaoninao fa tsy haiko!
-	Namono telefaonina mihitsy aho androany fa be loatra ny asa tsy maintsy nalamiko tao am –piasana satria handeha fialan-tsasatra manomboka amin’ny herinandro ambony aho.
-	Dia tsy hisy antsoantsoanay intsony izany?
-	Izaho no handeha fa ny asa sy ny mpiara – miasa amiko miaraka aminareo foana. Ka inona no ilànao ahy; sa voatery tsy maintsy any an –trano isika no hiresaka?
-	Mety ho vita eto ihany angamba ka !
-	Ka arosoy àry fa somary manenjinenjika fotoana kely ihany isika.
-	Hono, ho’aho ry Ndrônana, mba manontany anao aho: azonao havoaka amin’ny Gazety ve fa tsy jiolahy ilay lehilahy voatifitry ny Pôlisy tetsy Andravoahangy?
-	Fa inonao ilay izy?
-	Izany hoe, fianakaviana aho, saingy tsy mety amin’ny saina ny mieritreritra ny fahanginana fotsiny amin’izao; fa tsy maintsy mba miteny maneho ny alahelon’ny tena.
-	Ka izao e, Ny vadiny koa efa nihaona taminay ary efa vita ny fanadihadiana rehetra hamoahana ny andinindininy mikasika izay, satria asa sarotra ny asa fanaovan –gazety ka manjary maningotra anay io raha tsy maty porofo tsara ny fahamarinana sy fitombenan’izany. Na izany , na tsy izany anefa dia tongava ianao ao amin’ny biraoko rahampitso maraina amin’ny sivy
-	Ao amin’ny birao fanaovanao gazety?
-	Ao indrindra!
Nandray ny tanako izy dia nataoko veloma; fa ny saiko tsy niala tany aminy sy ity fisehoan –javatra hafahafa ity.
Ny tsy mampanjaka ny fahamarinana eo amin’ny Firenena iray dia ny toe-tsain’ireo izay heverina fa tokony hampijoro izany ary indrindra ny tsy fahafantarany ny hevitra lalina raiketin’ny teny hoe : “	MARINA”.
Sarotiny amin’ny filalaovam –pahefana eto Madagasikara aho raha samy hanao kapok’ombin’ny tsy miala vola ny mpifehy rehetra ; satria ny olona nantenain – kadamina indray no lasa fampihorohoroana sy fanakorontanana ny firenena. Dia any amin’iza indray ny vahoaka no hiandrandra fandriam –pahalemana?
Indray andro tao BERONONO efa nisy trangan – javatra tahaka izany : nandalo ny zandary mpisafo tany, ka nijanona indroandroa andro tao an –tanàna. Tsy fantatro na aretintsika Malagasy mihitsy na kileman’ny sasantsasany , fa efa lesoka hatrany amin’ny tolona fitakiana ny fahaleovan –tena izany “GASY MAMADIKA GASY” izany.
Notondroin’ny olona iray ho nividy omby taminy ity rangahy lehibe iray , nefa nolazainy fa tsy nandoa vola. Tsisy taratasy, tsisy porofo, fa izay fomba nampandriana ny tetika no tsy dia takatro loatra; fa nentin’ny zandary avy any ilay voatondro molotra dia tsisy fanadihadiana , tsisy alaharo fa tonga dia daroka kitay sy zera vodibasy no nampandadizany ilay rangahy eraky ny tokontaninay. I Dada no teo amin’ny fitondrana sy nitantana ny tanàna tamin’izay.
Samy nanana ny heviny ny olona teo am –pijerena iny vonoan’olona iny, fa tokana ny filazako azy : “FITSARANA MIANGATRA!”. Samy nitakorotsika ny vahoaka, samy nitsanga –nitoetra ; fa ny fihetsiky ny zandary tamin’izay no tsy levon’ny vavoniko mandrakizao.
Vonoan’olona, hoy aho, na dia tsy afaka aza ny ainy, satria raha ny rariny sy ny hitsiny , na dia tsy mahatakatra ny tetik’ady fampandriana ny tany be dahalo aza aho dia mahafantatra tsara ny didy aman –dalàna fa “ na inona na inona sora –keloka vitan’ny olona iray , raha tsy tratra am –bodiomby izy , dia tsy tokony iharan –tsazy mihitsy raha tsy efa vita famotorana”; ary iza moa no tsy mahalala mazava tsara fa ny zandary anie tsy mpanasazy na mpanafaka olo –meloka fa natao hihaza sy hisambotra fotsiny ihany e! Anjaran’ny Fitsarana ny manadio na manameloka, ny hanafaka na hanasazy. Kanefa impiry ? Impiry moa ao Miakotso no misy dahalo raindahiny afaka madiodio noho ny fananany vola andoavana onitra ho an’ny zandary? Ary impiry lavitr’izany koa ny fisian’ny mahantra migadragadra foana amin-javatra tsy natao noho ny halako bika tsy tiako tarehy, ny tombo tsy vorovoro, sy ny sisa: nigadra avokoa ankamaroan’ireny voarohirohy ireny satria tsy manam –bola! Tsy manan – karena !
Mahafantatra olona maro aho, tafavoaka ny fonja nitazonana azy fa nokarakarain’ny fianakaviana : nivarotana omby miasa, nivarotana tanimbary, na mahafantatra olona ambony sy manam –pahefana eo amin’ny fitondràna. Mandroba im –polo aty ambany ravinkazo izy dia miverina indray mandeha any Antanimora, ary mijanona telo volana maka aina any dia miverina mamaly faty sy manao izay tsy hampandry ny tany . vahoaka firifiry akory no tera –panontaniana amin’izay itoeran’ny fahamarinana amin’izany. Amiko ny marina dia dia fandrin –drano : izay mangalatra tokony higadra, ary izay migadra tokony hanapitra ny saziny any an –tranomaizina. Fa tsy tokony ho gaga isika raha mikorontana ny tany satria tsy voahaja ny ara- dalàna. Inona ny lalàna voasoratra sy nolaniana mifanaraka amin’izany? Ary hatraiza ny fanarahana azy? Fa izay no atao hoe: “FANAJANA NY ZON’OLOMBELONA”. Fa teto, tsy haiko na amin’ny tany lavit’Andriana , na amin’ny fiteniko matetika hoe: “ MANGINA I TANANA”; fa dia teo imasom –bahoaka no niseho ny fandikan –dalàna. Samy nanana ny fitsarany ho’aho ny olona, ary samy nisento dia nangina tany, fa izaho tsy nanaiky raha tsy nitabataba sy nivazavaza eran’ny tanàna satria tsy lanin’ny vavoniko loatra raha an-kasomparana no ampiharana ny lalàna.
-	Eto ambany seza eto ialahy mipetraka, fa tsisy hatorian’ny olona! Hoy ny treron’ilay zandary tanora, tamin’ilay antitra fotsy volo, sady nodakàny ny tongony , ny fofon –toakany amin’izany manempotra anay mianakavy eran’ny trano; Miditra mampijaly ilay rangahy izy dia mivoaka mandrora any an-tokontany .
Tsaroako tsara ary tsy lefy ato an –tsaiko mandrakizay ny vary nentin’I Mama hohanin’ilay rangahy nefa nosakanana.
-	Ento miverina ny sakafonareo madama fa sady tsy mahazo misakafo io no tsy mahazo matory a !
Ny mamo moa mamo eny ihany, nibetroka farany izy dia lasa.
-	Tsy misy miandry an’ialahy eo fa I sefo handeha hatory! Tandremo fotsiny sao mitsoaka fa azonay foana ialahy !
-	Fa izaho angaha nanao ratsy sefo a? Eto foana aho miandry izay sitra- ponareo. Mandehana ianao raha hatory fa izaho tsy miala ato,Ray aman-dReniko be loatra io tompontrano io
-	Ka na handositra koa aza moa ialahy ho aiza fa ny tanan’ialahy sy ny tongotr’ialahy efa mifatotra.
Vao lasa lavidavitra kely izy dia fantatr’I Dada fa tsy hiverina raha tsy elaela; raha hiverina ! Nalain’i Dada ny vary dia nofahanany haingankaingana ilay rangahy, avy eo, nampirininy ny vilia sy ny sotro.
Ny fahatsapako ny fahafahanay dia ny fitandroan’ny fianakaviako mandrakariva ny hasin’ny maha- olombelona, indrindra fa ny hasarobidin’ny aina.
Tsy miron –dalina amin’ny madilana hotentenina isika , faha raha tenenina,hono, ny lesoka, mba misafo ny azy koa ny petak’orona.
Tapa –bolan’ny nisarahanay sy I Miavo teo Anosy dia tonga indrindra teo amin’ny fotoana nifanomezana ny andro. Niomana fatratra aho fa hiseho vahoaka moa, sady nikendry izay endrika mety hitiavan’I Miavo izany Ndrônana izany : miroso manoloana ny fitaratra dia mihemotra manisika lobaka; mitsangana mamatotra karavato dia mipetraka mampiditra kiraro. Ny ora lasa…tsy ferana!
-	Ndrônana a! Hidina aho! Hoy ilay zandry kely tafantona tambony seza.
-	Ary aiza ny fanalahidin’ny fiarako no nataon’I zandry? Hoy aho sady nampidina azy. Sao dia entin’ise mody any?
-	Ity anaty paosiko ity! Omena? Hoy ny fibadabadany fa zaza tsy nafoy ahy izy.
-	Ilaiko iny ka !
Nanidy trano aho dia namelona ny fiarako. Tsy niandry ela fa tonga dia lasa. Manatomotra indrindra ny ora miandry : eny an –dalana aho vao lasa saina (…)
-	Ndrônana a! Hoy ny fanindron’ilay feo reko tampoka toa lavitra akaiky.
Nierika niankavia, niankavanana aho sady nanomboka nandeha mora . tazako avy eo amin’ny fitaratra aloha, fa hay I Miavo no nikopakopa –tanana teo an – kaviako nanamorona ny arabe fizoran’ny fiara midina avy any Anjanahary. Kanto I Miavo raha atao indray mijery fa tsy nampoiziko mihitsy izay fanamiany nendrehan’ny zipo lava mangamanga hatrany an –kitrokely izay.
-	Ampamonjeo sisiny aloha ny fiaranao dia mijanona mihitsy fa tsy tafiditra eny am –pandehanana eny aho ! Hoy ilay feo keliny arahin –goty .
Mbola tsy miafina foana fa taizan –dRenibe I Miavo ka nanjaka fitiavana , na dia efa tototry ny soa sy ny kanto amin’ny faharahana toetr’andro aza. Nitsiky kely sary nananihany izay aho dia namily ny fiara hilahatra amin’ireo efa nijanona teo aloha. Nohitsahako ny kifahatra ary nandinika ny fiaviny sy ny bikany manontolo nanatona ahy aho. Tonga dia novohany ny varavarana teo anilako ka niditra izy.
-	Ary manitra be anie ato anaty fiaran’I Ndrônana izany e!
-	Fanahy iniana mihitsy ry Miavo a!
-	Fanahy iniana ahoana?
-	Satria androko androany ka tokony hanotrona ahy avokoa ny soa sy ny tsara mifanandrify amin’ny fiainako; indrindra fa ny tontolo manodidina ahy.
-	Ka arahabaina àry i Ndrônana tratra fety e! Etsy horohiko kely!
-	Misaotra betsaka! Mahazoa toerana àry fa hiainga isika e!
-	Satria isika sy ianao irery no mandeha amin’ity fiara ity?
-	Efa natokana ho ahy irery mihitsy ity androany ! Oadray! Ho antsika sy ianao mantsy e!
-	Aza be vazivazy ry Ndrônana a!
-	Tena marina anie izany ry Miavo e!
-	Ka andao amin’izay àry e! Moramora ihany fa sao handona olona eny an –dalana eny ka tsy vita ny fety.
-	Sady ny namako efa miandry any daholo!
-	Raha azoko tsara dia be dia be tokoa ny olona hanotrona izao fetinao izao?
-	Maro tokoa satria ivelan’ireo tapaka sy namana tsy afa – miala , dia ho avy daholo koa ireo olona nasaina: Olon –tsotra, Manam –pahefana, Mpanakanto, Mpikaroka sy Mpandalina maro.
-	Ndrônana a! Fa ianao ity inona mihitsy e! fetinao ve dia hahatongavan’izany rehetra izany e?
-	Aza taitra ianao ry Miavo a! Mbola ho fantatrao amin’ny antsipirihany ny fiainako sy ny tantarany rehetra. Fa ny androany aloha dia hamonjy fety isika.
Nihazo an’I Mahavoky ny lalanay fa tsy nihodina teny amin’ny ROTSIROTSY; niadana dia niadana ny fandehako na dia tsy nisy fitohanana firy aza ny fifamoivoizana. Samy nangina kely vetivety izahay nefa tsy nitovy zavatra noheverina velively.
Fantatro tsara fa ny fety hatrehina sy ny ambaratongan’olona ho hita ao no nahajenjina ny sain’I Miavo , ka saika naharesy tory azy vetivety foana teo, ny ahy indray anefa dia ny momba azy sy izay mety hahatanterahan’ny fikasanay no nandrevo ny eritreritro ka nahatsindriako tampoka ilay fampaneno miraikitra amin’ny familiana. Efa nanatona hibedibedy ilay Pôlisy mpandrindra ny fifamoivoizana vao samy taitra izahay; nifampijery dia samy gaga : izaho nanatranga ny lelako moa I Miavo nihomehy tsy sazoka hafahafa izay. Nataon’ilay Pôlisy teo amin’ny fihirifany ny loha-ratsany dia nanatona moramora izy:
-	Azafady kely ny taratasin’ny fiaranao r’ingahy mpamily!
-	Ity sefo!
-	Ara – dalàna. Nefa mba hanontany anao kely aho : Mpamily vita fianarana ve ianao sa tonga dia nitondra fiara fotsiny?
-	Vita fianarana aho sefo!
-	Ka fantatrao ny lalàna?
-	Fantatro tsara sefo!
-	Dia inona no nanaovanao fanahy iniana?
-	Tsy izany fa variana aho sefo!
-	Olona mamily fiara ve ianao dia variana ry zandry? Fantatrao fa miantoka ain’olona ianao?
-	Mba sendra tsy nahy re sefo ô!
-	Ka mankaiza inareo?
-	Hamonjy fanasana tompoko! Hoy I Miavo nitsatsaingoka.
-	Any Analakely.
-	‘Ndao àry ! tandremo amin’ny manaraka!
-	Misaotra sefo.
Tsisy folo minitra akory ny nanadinana ahy dia efa nitohana izay tsy izy ny fiara tao aorianay, nikiakiaka tsy nifandrenesana. Nifampitopy maso izahay sy I Miavo dia samy velon –tsiky. Halan –doza foana isika ity! Hoy aho tany an’eritreritro tany, tsy niloa- bava. Novelomiko ny fiara dia lasa indray izahay, nitohy ihany ny dia.
Tsy nampitombo hafainganam –pandeha mihitsy aho fa izay afa – nisongona dia nisongona; ny tsy afa- nanoatra, nanaraka mora. Misiotsioka aho dia mihirahira sady manodikodina ny familiana ihany, fa I Miavo koa dia miha – miverina amin’ilay nofiny teo. Alefako hirahira ny fiara dia avadiko tononkalo tampoka: NANTENAINY, LALANY, NY DITRAN’ISE…, samy lohateny reny sy nifandimbindimby teo fa tsy nahataitra azy tamin’ny nofy maminy, fa vao hoe : “NY ZANAK’OLONA”, dia hendratra tampoka izy ary tsapako fa nitsantsika dia nitsantsika.
-	Inona no mampitsamboatra anao ry Miavo?
-	Efa reko foana izany tononkalo izany, fa anao angaha izany?
-	An’ny aingam –panahiko ka! Tianao?
-	Tiako be mihitsy!!! tena tiako aza.
Nangina tampoka indray I Miavo , toa nandefa saina lavitra vao niteny moramora hoe:
-	Ndrônana a! Ohatry ny mahafinaritra be izany ho’ aho ny miaraka aminao e!
-	Ohatrany sa tena mahafinaritra e?
-	Tena mahafinaritra mihitsy ! Na ny fitondranao fiara aza tsy mba toy ny an’olon – kafa. Sa manamboatra fihetsika ianao fa mitondra Andriamabavilanitra ?
-	Toy izao foana ny fihetsiko ry Miavo a ! Tsy misy n’inona n’inona vaovao mihitsy amin’ny mahazatra ahy afa-tsy zavatra tokana ihany dia izao : “misy anao eo anilako”
-	Sambatra ianao ry Ndrônana!
-	Nefa ho sambatra lavitra noho izaho ianao raha tÒ ny faniriako.
-	Izany hoe, ny fanirianao ahoana?
-	Miavo a! Mba afaka mitia anao aho ve?
-	Ndrônana! Dia tia ahy ve ianao?
-	Tia anao tanteraka aho ry Miavo a! Tsy haiko afenina intsony
-	Fotoana ve tokony ilazàko ihany koa fa efa tia anao hatry ny ela aho ry Ndrônana? Saingy tsy maintsy fantatro aloha fa tia ahy ianao vao ampahafantariko fa tia anao aho.
-	Satria nahoana?
-	Satria vehivavy aho ka tsy hisalovana ny zonao.
-	Dia hifankatia izany isika ry Miavo?
-	Manomboka androany ka ho mandrakizay raha sitraky ny Lanitra.
-	Etsy àry horohiko izany malalako izany.
Hafahafa amin’ny fiainana tokoa ny miaina rivotra hafa ivelan’ny mahazatra, indrindra fa ny rivo – pitiavana. Tsy tsaroako intsony ny fihetsiko rehetra nentina nanehoam – pitiavana an’I Miavo, fa indraindray fihiniko mafy be ny tanany, indraindray safosafoiko ny tarehiny , dia lalaoviko indray ny volony avy eo. Tsy nisy afa-tsy ny tanako iray sisa niantoka ny familiana, fa ny tenako iray manontolo toa lasan’I Miavo ambongadiny.
-	Ndrônana a!
-	Ahoana izay ry Miavo?
-	Afaka miara- mipetraka amin’ny malalako ve aho ao amin’ny fety ?
-	Tsy afaka ianao sombinaiko fa ny sezako irery no voahomana ao, kanefa aza matahotra fa efa manana toerana voatokana ianao: izaho no manatitra anao any.
-	Dia mifanalavitra be ve isika?
-	Manatrika ahy toy ny olon –drehetra ianao, ary izaho no atrehina. Manotrona ahy toy ny nasaina ianao fa izaho no otronina. Tsy mampisy elanelana antsika izany ry Miavo a! Fandaminana fotsiny fa tsy inona akory.
-	Dia ela be ve vao hifarana ity fety hovonjentsika ity ry Ndrônana?
fa maika angaha I Miavo?
-	Tsy hoe maika aho fa mba te – hivelatra bebe kokoa amin’ny fahafantarana anao sy ny amin’ny fifankatiavantsika.
-	Mamono masoandro mihitsy ny fety , fa manana fotoana malalaka isika any amin’ny toeram –pisakafoanana
-	Fa hafa angaha ny toerana hanaovana fety dia hafa koa ny hisakafoanana?
-	Toerana roa samy hafa ireo saingy efa voahomana daholo
-	Dia miara- mipetraka amin’izay isika sy ianao any amin’ny fisakafoanana a!
-	Mazava ho azy!
Manonofy zavatra tsy takatra aho mifamaly resaka eo anilan’I Miavo. Na ny saiko, na ny tenako dia tsapako nitambatra ho nofo fotsiny ihany, mipararetra kely izany aho indraindray dia mikoha - maina koa matetika. Tsy sasatra nisafosafo ny lohako izy nandritra ny dianay ary izany aza no saika nitarika ahy tamin’ny faharesen-torimaso ka nanadinoako ny fivilian – dalana manakeo amin’ny fiantsonana. Nihodina tany Andohan’Analakely indray ny dianay vao nidina tamin’ny lafiny avaratra.
-	Ampidiro eto fa eto malalaka e! Hoy ilay tovolahy kely nisafosafo ny tanany tamin’ny fitaratra tandrify ahy.
-	Ambenan’ise tsara anefa? Hoy aho nampidina ny fitaratra ho ambanimbany kokoa hifankazoan’ny resakay.
-	Fa adiny firy I ramose no any?
-	Mpaharivan’ny andro mihitsy fa sao dia tsy andrin’ise
-	Andriko fa izaho angaha mody aiza Ramose a! Ety anie izahay no matory e! Aza matahotra ianao fa andriko io.
-	Dia omena ohatrinona àry I zandry e?
-	Mba omen-dRamose ARIVO aho izany fa tapakandro iray manontolo.
-	Dia rehefa avy any izany ny volan’ise fa mbola tsisy madinika!
-	Sao dia mba misy kely ihany aloha Ramose fa tena mbola tsy nihinana mihitsy anie izao e!
Tsy naharitra nitazana sy nihaino fotsiny ny talahon’ilay tovolahikely vao telo ambinifolo taona monja I Miavo ka mba sahy nitrerona malefaka ahy; nitrerona nefa , nitrerona nahagaga ahy.
-	Ary raha mba omen’ialahy vola kosa izy aloha fa io anie no fitadiavany e! sa tsisy madinika any amin’ialahy?
-	Oay! Misy tokoa ato ka! Hay moa misy ato… Ary toa tsy ato am –paosiko aza izy teo! Azafady hoe mba sokafy amin’io vatakely alohanao io e!…Misy ve ?
-	Oay! Fa ataonao inona aty daholo ireto vola be dia be ireto ry Ndrônana?
-	Nanasa olona anie isika ry Miavo e! nanasa olona hihinana sy hisotro, ary hifaly sy hanao fety, ka tsy rariny ve raha miomana? – Mba hakao ARIVO ao àry homena an’I zandry e! Dia aleo omena mofo iray amin’ireto be dia be ireto izy fa ireo angaha moa ho lany?
-	Inty àry e!
-	Misaotra! Inty zandry a! Dia iny koa mba misy mofo iray omena an’ise. Dia ambeno tsara ny fiaranay an! Sao varian –dalao mantsy ise ka indramin –dry zalahy eo io.
-	Misaotra betsaka, tompoko! Matokia e!
Tsy tapitapitr’izay dia tonga daholo koa ireo mpitsena anay : tao ny te- hiarahaba fotsiny noho ny fety sy ny fahatongavana, tao ny hitatitra ireo entana sasantsasany nentinay tamin’ny fiara.
Niraisan’ny rehetra ny endrika sariaka sy feno hanihany; fa niombonan’ny daholobe koa ny ampahan –tsegondra toa nandinindinihana sy nagalaram –pijery an’I Miavo. Nisy nampitaha an’eritreritra tao fa tsikaritro, kanefa tsy nahita fifandraisany taminay mihitsy na endrika na volo na fihodirana. Vaka tamin- javatra tsy nampoizina tahaka izany ny maro, fa gaga aho raha tsisy tera- panontaniana tamin’iny fihaonana voalohany iny , na dia iray aza.
-	Tonga dia handeha izahay a! Hoy ny sasany, - mbola hijanona ve ianareo e? Hoy indray ny hafa; fa izay zokinjokiny teo no nanezaka hoe:
-	Sao dia mba tara ry Ndrônana a! aza ela e!
-	Andao àry e! Hoy aho nitantana ny tanan’i Miavo tamin’ny tanako ilany , sady nivimbina ny telefaonina tamin’ny ilany koa.
Poa toy izay dia niditra ny varavarana izahay sy i Miavo rehefa samy nahazo ny toerany daholo ireo nitsena anay. Vao nandingana ny tokonana izahay dia nitehaka nirefodrefotra tsy nisy ohatr’izany eran’ny trano; Izahay namakivaky lalantsara, moa ny andaniny sy ankilany izay nolalovanay dia nitsangana avokoa. Teo amin’ny aloha indrindra anilany ankavanana no nametrahako an’i Miavo; najoroko indray izy avy eo dia las	a namonjy ny latabatro sy ny sezako tery aloha aho..
-	Mahazoa toerana daholo tompoko! Hoy aho, dia mba namonjy ny seza fipetrahako koa aho.
Niroso ny fotoana, niroso koa ny resaka sy ny hevitra rehetra: samy namosaka izay tany an –tsainy ny tsirairay, ary naharitra adiny telo ny loa -bary an- dasy nifandimbiasako tamin’ireo olona nasaina sy vahiny manan – kaja. Faly tamin’ny laniny tokana fa maro no namaly ny antso, saingy saron –drahona ny ilan’ny saiko raha tsy nahita afa-tsy salovana vitsivitsy tamin’ireo sakaiza tsy nifankafoy tamiko hatramin’izay aho. Nanony ny foko niandalana teo am –pitoerana teo ny fahitako ny endrik’i Miavo teo anilako: olo-tokana mamikitra ny fitiavako! Tsapako ho hendratra dia hendratra izy raha nitsangana nametraka fanontaniana tamiko ny mpianatra mpikaroka iray tonga teo :
-	Raha mba azonao hazavaina, misy antony lehibe ve ny tsy nahatonga anao ho MPITANDRINA? Azafady tompoko!
-	Raha amin’ny maha – Olombelona ahy , dia manana porofo maro aho hanazavako ny antsipirihany; kanefa noho ny maha – drafitra maty paika ny fiainantsika eto an –tany , dia apetrako tsotra fotsiny hoe: mety ho tsy antson’Andriamanitra angamba fa faniriako fotsiny ihany ny hitondra Fiangonana ka izay no tsy nahatratrarako azy.
-	Izany hoe, raha tonga ny antso dia mbola vonona ianao?
Ny fandalàntsika ireo ANJARA sy LAHATRA ary TENDRY no heveriko fa mampilamindamina kokoa ity Firenena ity , fa tsapa ho tena namotika ny nentin –drazana ny toe-tsaina samy maka ho azy, naredaredan’ny fandrosoana; hany ka lasa zava – poana amin’ny Malagasy ny finoana ny tsiny sy ny tody satria mirehareha ho efa lasa lavitra isika.matoa aho nanaiky ny fisarahako tamin’I Sahondra kely efa nofofoiko ho vadiko mandrakizay , na dia efa fato –maty aza ny fifankatiavanay tany am – piandohana, dia satria fantatro fa tsy anjarako izy, ary nety nalahatra hifankatia tanatina fotoana voafetra izahay fa notendrena hisaraka tan – tendron’ny lalana nangidy indrindra.
-	Mafy saina ihany ianao nahalefitra ny nataon’I Sahondra, fa tsy namaly faty azy , hoy ny namako rehetra.
-	Ny soa atao levenam –bola , hoy aho, fa ny ratsy atao loza mihatona. Tsy maintsy hatsingerina amin’ny isam –batan’olona ny zava-bitany teto amin’ity tany ity, na ho ela na ho haingana. Ka na tsy hahatratra an’I Sahondra aza ny todim –pitiavana, dia tsy ho afaky ny taranany, ary na dia tsy azoko aza ny valim –pitia noho ny tsy namaliako faty azy, dia mba hanambinana an –janaka aman –jafiko mifandimby.
Nitohy ny ady hevitra…
-	Raha ny fahitako manokana dia miompana amin’ny seha –pitolomana ny androatokon’ny tsangan –kevitrao, ary ao anatin’izany no ahatsikaretako fa tsy tena mandry fahalemana ny Firenena, raha ny fomba fijerinao manokana. Toa olona tsy afa- po amin’ny zava-misy izany ianao fa mikatsaka tontolo tonga lafatra mandrakariva. Azonao hazavaina kely ve tompoko? Hoy ilay Olo – manan – kaja iray nifanila toerana tamin’I Miavo.
-	Tsy hoe izaho no tsy afa –po, fa ny zava – misy ihany no tokony hampianatra antsika ny zava – misy; tsarao amin’ny tranga ny hevitra, ary aleo hipetraka ho fandrin –drano ny marina : “mitovy torosy, tsy mitanila”.
Diniho tsara: sempotry ny tolona sy ny adim –piainana ny teto an – tanàna, ka tonga leon’ny fahoriana sy ny tsy fananana, sasatry ny mosarena sy ny nadio tsinay nandry fotsy, ary kivin’ny andraso….andraso…lava; ka tena efa vonona ny hitokona. Nanaovana antso avo indray fa VAOVAO ny FANANTENANA : ho avy ny vary, ho avy ny laoka, hitombo ny aina ; dia rohotra daholo indray nankany; inona ny teo? Fitaka foana ny nandoaroany jabora fa toy ny ala ihany ny ripatra.
Tsy azo natao ahoana intsony fa namotoka haiky ny be sy ny maro, tsisy farany intsony ny “AOKA IZAY” eraky ny arabe sy ny elakela-trano, fa jembin’ny kaikitry ny amboakely tiana. Nanidy trano ny sasany , nanao valabe ny ankamaroany ; Ireo vitsivitsy mbola niandry ny sidina manaraka aza, mbola vao teo amin’ny fiantsonana dia efa namatotra mafy ny hetrany. Tampotampoka teo, nolambolamboIna tamin’ny lela mamy sy ny lamba mamirapiratra , ary nojonojonoina sy nosafosafoina tamin’ny vatomamy sy ny “inty kely” ny fanalahidim –bohitra, ary nikokohana “FAHAMARINANA sy FAHAMASINANA!” teny am –bavahady; tsy nisy toa inona akory dia tafaporitsaka daholo ny lafy valo, nisy tsy naharay lamba mihitsy aza ny sasany nitsangan –ko lohany.
Niakatra teny amin’ny toeram –pitsaboana izahay fa am –bavahoana ny zaman’Iantso, ka nentina tamin’ny sarety; izahay tonga, ny Mpitsabo nampiandry fa mbola hijery ny fanirian’ny mangahazony any an –tsaha, hono. Niangavy sy nandresy lahatra azy mafy aho , fa efa niady tamin’ny fahafatesana ny marary, kanefa vao mainka nadrodrodrodrony mafy ny môteran’ny môtô dia iny izy no lasa. Tsy mbola tafaverina akory izy dia tapitra ny ain’I Zaman’Iantso. Nozogaina indray ny omby dia nentina niverina nody ny razana.
Aminareo, FAHAMARINANA inona no hanjaka any amin’ny tany lavitra andriana , raha mbola mamelon – drirana sy manadio kiraro eto an –drenivohitra ny tompon’andraikitra ambony miahy ny madinika, FAHAMASINANA inona no mipetraka ao anatin’ny tsy fitandrovana akory ny ain’olombelona? Fa saingy voizina ho marina ny diso dia MARINA, ary vasohana ho diso ny marina dia DISO; takotakonan’ny bozaka sy ny ravin-kazo izahay any dia odian – tsy jerena, ary sakantsakanan’ny fotaka sy ny lalan – dratsy ka tsisy mpitsirika. Manginy fotsiny izany raha famborahana ny fahoriam –bahoaka, fa mbola fery hafa ihany koa ny fanabeazana sy ny Tanàna raha samy hosokafana.
Any an-tsaha any, tsisy mahalala izay FAHAMARINANA sy FAHAMASINANA any, fa ny FAHORIANA sy ny FANGIRIFIRIANA no tsakoany andro aman’alina.
Ny tena “fahotana mahafaty indrindra” amin’ny fahazaran –dratsintsika Malagasy, dia ny tsy fananana hazon-damosina fa matin’ny rombon’Ikalamarenina: miara –mirona , dia miara – mivarina, ary any no marodona dia any tokoa no miatonta nefa efa lefona maranitra no mitaty ao.
-	Mba azonay fantarina ve tompoko ny anaran’ny tanàna misy anao any Ambanivohitra any
-	I BERONONO no anaran’ny tanànako sy mbola onenan’ny Ray aman –dReniko hatramin’izao.
Nirava ny fety, nidina naka an’i Miavo teo amin’ny toerany aho dia nitarika ny olona nankany amin’ny fisakafoanana izahay. Samy nitombina tamin’izay seza tiany tao fa tsy nisy toerana voatokana intsony afa – tsy ny seza teo anilako izay nahagaga ahy fa nitombo iray vetivety foana teo
-	Mahazoa toerana daholo tompoko ! hoy aho dia nosarihiko hitombina ihany koa i Miavo
-	Tsy mbola reraka be ve ianao ry Ndrônana? Hoy ny fiangotiny namihina mafy ny soroko.
-	Fa maninona aho no reraka?
-	Ka ianao anie miteny, tsy mba mahay miteny mora fa manezaka mafy ery e!
-	Rehefa fifaliana tahaka izao no atrehako dia tsy mahatsapa harerahana aho raha tsy efa any am – pandriana. Satriko foana aza hiteny mba hanome fahafaham –po ny olo – manatrika.
-	Ary ianao tena mahay miteny an!
-	Mahay miteny ahoana ry Miavo a?
-	Tsy kisendrasendra foana, hono, ny maha – Mpanao gazety anao fa tena talenta mihitsy
-	Iza no niteny izany?
-	Ilay rangahy nametraka fanontaniana teo anilako iny. Variana be mihitsy izy mibanjina anao. Toa tsikaritro mody manitatra fanontaniana izany aza izy mba hahalava ny resaka havalinao azy.
-	Dia mahatsikaritra zavatra mihitsy ianareo ireto marina. Tsy ny firesako andavanandro ihany ve no nataoko tao e?
-	Ohatry ny Ndrônana hafa mihitsy aza no natrehanay tao fa tsy ianao ilay be hanihany sy tsotso –po malefadefaka isan’andro, taitra tampoka aho indraindray mahatsikaritra anao ohatry ny mitroatra mafy sy mampiaka –peo
-	Teren’ny zava –misy aho ry Miavo a! Ireny no zavatra tsy azo andeferana ireny.
-	Ary raha hamahàna kely ny karavatonao fa mafana be loatra anie ianao izany e! jereo ity hatsembohanao
-	Adinonao angaha fa imasom –bahoaka isika izao? Samy tsy azo atao ny mamaha kiraro, na manala palitao na mamaha karavato raha miatrika olo –maro tahaka izao ; raha fara –tsy fidiny tena tsy zaka aza dia miala tsiny amin’ny rehetra aloha izay vao azo atao izany. Fa aleo ho izao e! mbola zakako ihany tsinona.
-	Aza dia mihafy loatra ohatra io fa sao entin –kenamaso e! Mbola ho ela anie ny eto vao hirava e!
Samy nanatràka ny lohany tampoka izahay sy i Miavo fa nanatona ahy ny mpikarakara tao amin’ilay fisakafoanana.
-	Miandry ny fanoloranao ireto sakafo ireto anie ny rehetra vao hanendry e!
-	Oay ! Azafady fa saika hadinoko marina ! Misaotra anao.
Nitsangana nanolotra ny sakafo aho, dia mba nilazaza ny amin’ny fombafomban’ny anton’ny fanasana toy itony sy ny foto –kevitra raiketiny ary farany dia navitrako tamin’ny hoe:
-	Dia mirary antsika rehetra samy hazoto homana daholo, hohanim –belona hohanim –pinaritra tompoko ô !
Nandroso ny fety, nandroso ny ora, fa nihazakazaka mafy lavitra noho izany rehetra izany ny fahalianan’ny saiko hitavana izay ao am –pon’I Miavo mikasika izao fifankatiavanay izao. Niara –nandingana izahay fa tsy fantatro izay lasa aloha, efa nitovy hatry ny ela ny tadin –dokanga amin’ny ankapobeny fa ny porofony no sisa andrasako eto amin’izao ora mamy indrindra amin’ny fiainako izao.
-	Efa nahalala ahy hatramin’ny ela tokoa ve ianao ry Miavo sa tsatotsato – dresaka fotsiny izany ?
-	Tsatotsato –dresaka fotsiny ahoana ry Ndrônana a? fantatro ianao, fantatro tsara, ary raha tianao hazavaiko bebe kokoa dia hoe : ny ankizy teo an – tanàna no tena nahalala anao talohako sady nifandray be taminao dia mba noezahako koa izay hifandraisantsika. Hitako foana ianao mividy zavatra eo amin’ilay Mpivarotra akaikin’ny Biraonao io isaky ny amin’ny sivy na amin’ny folo iny e! Dia tazako mitsakotsako kely mivoaka avy eo, na mivimbimbimbin – javatra miverina any amin’ny Birao. Teo no tena nahalalako tokoa fa “tia hanina ianao”. Sady ny mahagaga ahy anie ry Ndrônana dia ny ankizy rehetra eo an –tanàna dia hainao ifandraisana avokoa na lahy na vavy, eny fa na dia hatramin’ny zaza aza. Nisangisangy teo an –tokontanin’ny Birao mihitsy no nahatsikaretako ny tena toetranao : tsotra, sariaka sady mitsikitsiky lava; Be resaka sy be vazivazy. Tsotra ianao e! Tsotra be mihitsy!
-	Dia izany no itiavana ahy?
-	Mbola misy zavatra hafa koa ka !
-	Inona ohatra ?
-	Be dia be !
-	Inona e ?
-	Ny fiteninao, ny fitafinao, ny fandehanao, ny fijoronao, ny toetranao….
-	Dia inona koa? Izay fotsiny ve?
-	Ianao rehetra mihitsy e!
Nangina kely aho ! niato segondra vitsy ny resaka vao nisy tohiny indray. Saika mbola tsy hiteny fa variana nisafosafo saoka sy nanapoapoaka tanana teo ambony latabatra fisakafoanana, kanjo tsy tratra fa nangina tsy satry koa ny tao amin’ny efitra rehetra ; ary sady nitsanagana no nanangan –tanana ilay namako iray be vazivazy.
-	Miala tsiny indrindra, tompoko, fa mbola misy fanontaniana tsy voapetraka teo ka tsy aritro raha tanana am –po. Izy moa izany no iza ry Ndrônana?
Lokilokin’ny hehy ny olon –drehetra, fa I Miavo nivoaramena tsy nisy ohatra izany, izaho tera –tsemboka tao anatin’ny iray segondra; nitsiky tokana nanaron – kenatra aho dia nitsangana ho toy ny tsy taitra nitondra fanazavàna tokana.
-	Izy no Miavoko hitanareo eto, ary raha sitraky Ny Avo dia hofofoiko ho vadiko mandrakizay izy.
Tehaka izao, horakoraka, kiakiaka tsy nifandrenesana eran’ny trano. Tsy nisy nizara fa tany amin’i Miavo avokoa ny masony . Ela ny ela, hoy ny antsoantson’izy rehetra; nitia ihany izy nony farany.
-	Nisongadina teo amin’ny tantaram –piainanao fa tia niaina fiainana lavitry ny rahoraho sy tsy itoeran’ny olana ianao, ka nitarika anao ho amin’ny tsy dia firaikàna firy teo amin’ny kianjan’ny fitiavana izany. Mitia ianao izao, hiaina fiainana mbola tsy nodiavina ary hanandrana tranga tsy mbola voasedra. Te – hampahatsiaro anao izahay ry Ndrônana hoe : tsara sy nahatamàna fatratra tao Edena kanefa iza no nino fa ratsy ny menaràna raha tsy efa voafitak’I Eva I Adama?
-	Zava –poana r’ise ny bika ary fitaka ny hatsaran –tarehy a! fa ny vehivavy matahotra an’I Jehovah no hoderaina. Ary matoa io notiaviko dia laniko tanteraka sy masaky ny foko, ka tiako tena tiako!!! Hoy aho namaly tsy rototra ny ahiahin’ny manam –panahiana.
Marina fa ny efa nahita no tena manana traikefa amin’ny fiainana , ary nanombana an’I Miavo tanatina fotoana fohy ny sasany dia nanana ny heviny momba anay roa. Izaho, vahiny niakatra Ifò, ka tsy mbola nahalala ny fitaka sy ny fiantsaram –belatsihy, fa tia dia tia, ary nahatoky fitiavana.
Mety ho taitra alohanao ny hafa amin’ny fiainana satria tsy maintsy ny eny ivelany no mahita taloha raha mbola eny andrefan –tanàna ny tafika , fa mikoropaka amin’izay ny ao an –trano rehefa rava ny manda fito sosona. Amin’ny lafiny iray , te – homahana aho fa ny fambara vorona aza, hono, inoana, mainka fa fambara olona; amin’ny lafiny hafa koa anefa te – hiziriziry aho fa tsy hino maty raha tsy avy mandevina. Novonoiko tao an –tsaiko ny fakam –panahy tsy hiainako iny ora mamy indrindra iny ka narodako tamin – javatra hafa ny efitry ny fiahiahiana.
-	Trano sy harena no lova avy amin’ny Ray , fa ny vady hendry kosa avy amin’i Jehovah, hoy aho tamin’izy rehetra sady nosafosafoiko ny volon’I Miavo.
Nitehaka ny olona, dia nihomehy, dia nikakakaka ary namonjy toerana, dia niverina tamin’ny laoniny indray ny sakafo sy ny koràna isan –databatra.
-	Hofofoinao ho vadinao mandrakizay aho hoe ry Ndônana a?
-	Eny ho ‘ aho ! Fa ahoana ? Tsy mazoto angaha ianao?
-	Tsy hoe tsy mazoto aho fa sao dia maika loatra isika ?
-	Maika loatra ahoana ry Miavo a ? ka tsy izay hatao ihany ve no atao e ?
-	Eny e! fa na izany aza, tohatra ve tsy afaka , dia ny rindrina no hihanihana e?
-	Tsy azoko mihitsy ny tianao hahatongavana !
-	Na dia ianao mieritreritra aza, ny toetrako tsy dia mbola fantatrao akory, ny fianakaviako tsy hainao na mifandona aminao eny an – dalana aza, ny finoako, ny fiaviako, izay tokony hifamenoana sy hifamonoana rirana. Izany rehetra izany anie no anisan’ny fepetra mampakatra ny fifankatiavana ho amin’ny sehatry ny fanambadiana e !
-	Nefa amiko indray ry Miavo a, rehefa mifankatia isika dia ampy ; tsy tokony hisy resaka saranga sy fiaviana io, sady zavatra efa nilaozan’ny toetr’andro izany e!
-	Nilaozan’ny toetr’andro ahoana kosa ? Ny tanin’Andriana ve tian – konenana nefa ny satan’Andriana tsy harahina ?
-	Inona no tianao holazaina amin’izany ?
-	Fahendrena nentin –drazana ny mamakafaka sy mamotopototra izay ho tokantrano ry Nrônana a!
-	Kanefa tsy nentina hifanambaniana izany.
-	Fa manambany ahoana moa ? Olona tahaka anao izao ve no mendrika ho hambaniana e?
-	Hoy ianao ? Izany no saika naharava ny ankamaroan’ny fifankatiavan’ny tanora teto: resaka harena, tenim –pirazanana, ava–bolon–koditra , hatramin’ny fahaizana amam –pahalalana sy ny sekoly nodiavina. Hany ka tsy afaka milahatra intsony ny mahantra sy ny mpanakarena, ny finoana roa samy hafa, ny mifanohi –bolon –koditra , sy ny mitovitovy loko amin’izany. Dia aiza ny hasin’ny fifankatiavana amin’izany ? tsisy ! Tsy fahendrena nentin – drazana ny iainantsika amin’izao fotoana izao fa sao dia diso ianao ry Miavo! Ny an’ny Razantsika tsy nandala “tany avo avaratra”, tsy nankamamy “havako raha misy patsa”, ary nanameloka ny fisehosehoana amin’ny harena sy ny voninahitra, fa ny mahery tsy mba nohobiany, ary ny resy tsy mba nakorainy: “voin –kava – mahatratra” ny andavanandrom –piainany.
-	Lalina izany ka lalina ! hay tokoa aho moa miteny Lango imason’ny vary ? Mitafy lamba imason’ny tompony ! Laingako mantsy izany fa fofom –badinao aho e! Hifampiteraka isika raha sitraky ny Avo. ‘zany moa ô ?
Niangoty tamiko izy dia namihina mafy ny tanako ary namonjy niankina tamin’ny ilan – tsandriko . tsy niteny aho fa nitsiky malefaka taminy dia namerina ny resaka nankany amin’ny sakafo.
-	Matavy be loatra koa izy izany ka mahamonaminaina ! sa tianao ihany ?
-	Izaho aloha tia matavy e, sady tia mihina –menaka fa ny mahagaga ahy ny tsy mba itiavako kisoa.
-	Mba ahoana koa izany ry Miavo ? Ohatry ny hoe : “tia hira ianao fa mankahala feo voalohany”
Samy lokilokin’ny hehy izahay roa, izay i Miavo vao nikapoka mafy ny hatoko sady nananihany ahy be indrindra . be vazivazy izy fa anatina fotoana fohy sady ampahatsiahiviny koa angamba fa fety no anotronany ahy.
Nihitatra kely nankany amin’ny hira sy ny dihy ny fetinay , dia tapitra tanteraka iny andro iray toa zato iny. Niverina naka ny fiara izahay dia nanatitra an’I Miavo teny Masikara indray , izay vao niverina irery tany an –trano iny alina iny. Fety tokoa ka fety, ary sarotra ny inoana ny mbola hitapodian’ny ora mamy tahaka iny, noho izy tsy mana –paharoa loatra. I Miavo aza, izay sady vavy tokana no taizan –dRenibe, dia nahavita nilÒn’alina niaraka taminay sy nianoka ny tsiron’ny fifankatiavana vao miandoha.
Tamin’ny valo aho vao tafafoha ny marainan’iny , ary tamin’ny sivy sy sasany vao tafiditra ny Biraoko. Namonjy asako aho dia niverina tamin’ny andavan’andro mahazatra indray, niaina ny fiainana rotoroto lava tsy misy hakàna aina.
-	Soa ihany ise fa tonga, noheveriko mbola tsy ho tafakatra mihitsy androany hoy ny Lehibeko, tamiko.
-	Fa ahoana no tsy hiakatra sefo a ? Hanary kapoaka ?
-	Ka fantatro anie ise fa mbola reraky ny fety e! tsy nanome tsiny mihitsy aho raha tsy tonga ise .
-	Misaotra e ! ka misy itadiavanao ahy angaha ?
-	Tena mitady an’ise mihitsy aho izao , misy taratasim – bolantsika halaina dia mba soniavin’ise ary mba hakàna kely vola any amin’ny Banky fa hanamboatra ny karaman’ny Mpiasa isika manomboka rahampitso.
-	Sady misy mpiasa sasantsasany misondrotra karama amin’ity volana ity.
-	Ka izay mihitsy no andaminana azy dieny izao. Dia	sao dia gaga ise rehefa manasonia ilay taratasim –bola , fa tsy nisy entana naterintsika akory.
-	Kanefa dia hahazo vola ve isika sefo ?
-	Mahazo isika fa aza matahotra ise, vola efa tafavoaka anie izany e! alaina any amin’ny Banky fotsiny sisa ?
-	Ka sao dia mba zavatra mampigadra izany sefo a ! vidiny tsy nandoavana entana anie izany e ! Inona àry no mahataitra an’ise ? Izany no atao hoe afera.
-	Ka sao hanimba ny asantsika izany afera maloto izany ?
-	Fa ahoana ?
-	Ka raha fantatry ny lehibeny kosa ve tsy hiara – votsitra na ny tsenantsika na ny asany ?
-	Fa ise ve mbola manofy fety e ! tompon’andraikitra ambony ao amin’ny orinasa anie izany miara –manao afera amintsika izany e! Omena azy fotsiny ny ampahany dia antsika ny sisa.
-	Izany hoe : Kopaka isasahana ?
-	Mazava ho azy !
Betsaka ihany no mbola manaporofo ny maha – tany mahantra antsika, indrindra fa eo amin’ny asa aman –draharaha sy ny tontolo ankapobeny. Tsy ny halahatra ahatratrarana ihany anie no fahotana mahafaty fa na ny halatra miafina aza e! Rehefa mangalatra ianao dia meloka, na eo anatrehan’ny angalarana, na eo anatrehan’Andriamanitra. Matoa tsy mety foana ny tsolotra sy risoriso, ny tia kely etsy sy eroa, dia satria misy hatrany ny lemilemin –dRadita, misy olona tamà – miray tsy mifanary amin’ny ratsy, ary misy sokajina Mpanakarena zatra mivelona sy mihary harena: na amin’ny hosoka sy ny fanambakana, na amin’ny fitaingenam –bozona ny hafa. Ankoatr’ireo ampaham –bahiny tsy mataho –tody manao tsinotsinona zon’ny Teratany , dia misy dia misy tokoa Malagasy manao fitaovana ny Malagasy ohatra azy.
Nohararaotina tamin’ny tsy fananana asa ny ankamaroan’ny olona fantatro, ka nampidirina tamin’ny karama kely; jembin’ny didin’ny famelomana ka tsy mitandro aina hahitam –bola, ary atosiky ny adidy sy fitolomana ka manao varo –mora ny rara – dinitra . Nampiasaina ireo, nodidiana sy nomena baiko isan’andro, tsy nampahafantarina andro fety fa rombahina hatramin’ny fitsaharany, satria tsy afa – midrikina noho ny fahantrana sy ny tsy fananana.
Notambatambazina hotamàna izahay tamin’ny voalohany, nomena kely, nosangisangiana sy novangivangiana matetitetika; niresahana sy nalàna andro, taoriana, rehefa nandroso ny asa ka hita fa niroborobo dia niha – niavonavona ny fon’ny Mpampiasa: tsy miresaka ela intsony, nanjary tsy nahalala teny ierana fa didiko fe –lehibe. Taorian’ny fiovaovan’ny ora fidirana sy firavana dia niova tanteraka ny tontolo niainana : nolazaina aloha fa nanomboka resy tosika teo amin’ny fifaneraseràna sy fandraisana olona izahay, nitarina indray avy eo fa nihena ny fidiram –bola tao anatin’ny iray volana, ary niafara tamin’ny fanambarana fa matiantoka ny Orinasa. Voaloa isam –bolana ihany ny karama, fa naloa an –kafetsena, na am –panambakàna angaha no tena marina e ! Isaky ny hifarana ny volana dia nanangànana ady foana ny mpiasa rehetra ary tsy nitsahatra intsony fa raha tsy nolazaina fa nisy zavatra simba tao dia nobantiana mihitsy ho nisy zavatra very; ary ireny rehetra ireny , na tapa –panjaitra iray aza dia tsy nisy afa – maina fa samy nandoavam –bola avokoa, ary ny tsy levon’ny vavoniko mandrakizao dia ilay toe – javatra iray niaraha – nahita sy niaraha – nanaiky , nefa dia nodiana tsy hita ohatry ny tonom –bomanga vory vahoaka.
Hividy zavatra no nidirana mpivady tao amin’ny Biraonay, dia nanotanitany sy nanadihady zavatra betsaka, ary avy eo dia nasainy navoaka ilay fanamafisam – peo kely fa hoe hovidiany, kanjo izahay samy variana, zavatra hafa no voafaoka’ireny olona ireny, afaka adiny iray taty aoriana vao samy tonga saina izahay fa very taorian’ny fandalovan’ireo ny karatrantsoanatariby maro valonany iray, efa mahatratra any amin’ny efapolo isa any hoa any. Nitarainana ny zavatra tahaka izany, fa tsisy indra – fo, tsisy ady varotra fa ny vola no haloa.
-	Nisy olona nanadalo tao amin’ny Birao hoe hividy zavatra , tompoko, dia ny zavatra hafa hay no nofahony ary lasany any fa tsy ilay zavatra saika novidiany.
-	Ohatrinona ny totalin’ny very ?
-	Enina alina ariary , tompoko !
-	Dia mizara telo izany ! samy banga roa alina isan’ olona ny karamanareo amin’ny faran’ny volana .
-	Ka tsy fidiny ho anay anie ilay izy fa samy sendra ny tsy nahy daholo e!
-	Ka tsy te – halala izany aho fa vola feno no fantatro e ! Raha banga angaha ny karamanareo amin’ny faran’ny volana , hanaiky ianareo na dia ariary aza, kanefa ny volako no tadiavinareo ho vitavita fotsiny amin’izao ! Andraikitrareo izany, ary tsy misy idirako mihitsy ! mandehana miverina dia ataovy ny asa fa mbola amin’ny faran’ny volana vao hifankahita amin’izany, ankoatra ny hafa izay mbola hanampy azy.
Rehefa tena nandinika aho ka namadibadika ny lalana rehetra nitondràna anay, dia efa aty aoriana ela be aty vao tsapako fa hay nogadraina nohambakaina izahay nandritra ny iray taona sy tapany. Zavatra tsy ara – drariny avokoa no nanerena anay. Taiza tamin’ny fiainana no mbola nisy MALAGASY tsy nahalala ny fahendrena nentim –paharazana hoe “miloloha lanitra tsy maintsy lena, ary ny mandia tany tsy maintsy solafaka “. Iza no no tsy nahalala izany ? Fa ny tena marina dia nitsambiki – nikimpy mihitsy ny sefonay, fa hamaboana ny herim –po sy ny hatsembohanay amin’ny vidiny mora sy tsy hitan’ny harenany akory. Tombanana ho lafo eo am –pidirana ny karama, fa lahona ianao vao mahazo ny an
Sokajy : FITIAVANA
Daty : 30/04/2004
Mpamangy : 4753